ဖြစ် စဉ် များ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဖြစ် စဉ် များ
ဖြစ် စဉ် များ
Posted by Yan Shin on Jun 11, 2011 in Copy/Paste | 11 comments
၁။ ဖြစ် စင်
ခေတ်မှီတိုးတက်ဖွံဖြိုးသော နိုင်ငံတော်သစ်ကြီးတည်ဆောက်မဲ့ နိုင်ငံတော်အစိုးရသစ်လက်ထက်မှာ နိုင်ငံတော်အတွင်း ဆင်ရဲမွဲတေမှု့ လျှော့ချရေးစီမံချက်စတင်အကောင်အထည်ဖေါ်နေပါပြီ။
စီမံချက်ထိရောက်ပုံကလည်း အံ့သြဘနန်း ထိပဲထိရောက်မြန်ဆန်လွန်းပါတယ်။ ခုပဲရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာ ကြည့်လေ ဆင်းရဲသားတွေ တော်တော်နဲသွားတာပဲ။ လမ်းဘေးဈေးသည်တွေ တော်တော်ပါးသွားပြီ၊ တစ်ချို့နေရာတွေဆို လမ်းဘေးဈေးသည်တွေ လုံးဝကို မတွေ့ရတော့ဘူး။
သေခြာမေးမြန်းကြည့်တော့မှ ဘယ်ရှိတော့ပါ့မလဲ ဆင်းရဲသားတွေ လမ်းဘေးဈေးသည်တွေကို ဖမ်းပြီးထောင်ထဲသွားထည့်ထားတာကိုး………….
သြော်…… ဆင်းရဲသားပပြောက်အောင် ဆင်းရဲသားတွေကို ဖမ်းပြီးထောင်ထဲထည့်ထားတာကိုး…..
(ခက်နေတာတစ်ခုက ကျွန်တော် ဆူးလေလမ်းကနေ ပန်းဆိုးတန်းဆိပ်ကမ်းကို သွးတော့ ရဲစခန်းပါတ်ဝန်းကျင်မှာ ကျူးကျော် လဘက်ရည်ဆိုင် မုန်းဟင်းခါး အသုပ်ဆိုင်တွေ တွေ့နေရသေးတယ်။ သတင်းပေးမယ့်သူ မရှိလို့ဖြစ်မယ်။ ဝေးတယ်လေ။)
၂။ ဖြစ် စင်
လဘက်ရည်ဆိုင် NGO အသိုင်းအ၀ိုင်းစားပွဲဝိုင်းနားမှာ ထိုင်နေမိတုန်း သူတို့ဆွေးနွေးနေသံကြားမိပါတယ်။ တစ်ယောက်သောသူက သူသွားခဲ့တဲ့ ဆွေးနွေးပွဲအကြောင်းကို ပြန်ပြောပြပြီး ဆွေးနွေးနေကြတာပါ။ သူသွားခဲ့တဲ့ ဆွေးနွေးပွဲက ရေလုပ်သားများပင်လယ်ပြင်လုပ်ငန်းခွင်အန္တရယ် လျှော့ချရေးဆွေးနွေးပွဲလို့ပြောပါတယ်။
ရေလုပ်သားများပင်လယ်ပြင်လုပ်ငန်းခွင်တွင်း အန္တရယ်ကျရောက်ခဲ့ရင် သေကြေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု့ လွန်အင်မတန်များပြားကြောင်း တစ်ယောက်ကပြောတော့
“လွယ်ပါတယ်ကွာ ငါးဖမ်းလှေတွေ ပင်လယ်ပြင်မှာ သွားပြီးငါးဖမ်းရတာ အန္တရယ်များရင် ကုန်းပေါ်မှာပဲ ဖမ်းခိုင်းပေါ့´´ တဲ့……….
၃။ ဖြစ် စင်
ခုတလော ကမ္ဘာ့စကားဝိုင်း မြန်မာ့စကားဝိုင်းမှာ မပါမပြီး စူပါဟော့ကတော့ ၀က်နားရွက်ပြာရောဂါ(PRRS, Pig Reproductive& Respiratory Syndrome) ပါပဲ။ ကူးစက်နှုန်းမြန် သေနှုန်းပြင်းထန် ကုသဆေးမရှိ ကာကွယ်ဆေးမထုပ်နိုင်သေး (ထုတ်ပြီး တရုပ်ပြည်မှာသုံးသော်လည်း အဆင်မပြေပါသဖြင့်)
သူငယ်ခြင်းတွေစုပြီး စကား သတင်း ဗဟုသူတ ဖလှယ်ငြင်းခုန်နေတုန်း တစ်ယောက်က ၀င်ဆွေးနွေးလာပါတယ်။ သစ်လွန်းနေလို့ တိရိစ္ဆာန်ဆေးဝါးကောင်စီကိုတောင် တင်ပြရမလိုလိုပါပဲ။
၀က်နားရွက်ပြာရောဂါ ကူးစက်မခံအောင် ၀က်နားရွက်တွေကို ကြိုဖြတ်ထားသင့်ကြောင်း အဲဒီဝက်မှာ အဲဒီနားရွက်မရှိတော့လျှင် ၀က်နားရွက်ပြာရောဂါပိုး ကူးစက်ရန်နေရာမရှိတော့သောကြောင့် ရောဂါဖြစ်ခြင်းမှ ကင်းဝေးစေမည်ဖြစ်ကြောင်း ၀က်တစ်ကောင်လုံးဆုံးရှုံးခြင်းထက် နားရွက်နှစ်ဖက်ကိုသာ ဆုံးရှုံးခံခြင်းဖြင့် ၀က်နားရွက်ပြာရောဂါ ကူးစက်မှု့ကို ကာကွယ်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း …….. အကျယ်တ၀င့်ဆွေးနွေးတင်ပြသွားပါတယ်။ အဟောသိကံ… ကောင်းလေစွ…. ခုလိုပညာရှင်မျိုးရှိနေတာ ဂုဏ်ယူစရာပါပဲ။
ခက်ဆစ်ဖွင့်ဆိုချက်။	။ ဖြစ်=ဖြစ်ညှစ်ခြင်း	စင်=ထိမှန်၊ ပေ စင်ခြင်း (နဲနဲတော့နံမည်)
ဖေါင်ပိတ်သတင်း။	။အထပ်ပါ ဖြစ် စင် (၂၊ ၃) တို့တွင်ပါဝင်ဆွေးနွေး အကြံပြုသူနှစ်ဦး ယ္ခုအခါ ရှောင်ပုန်းနေရကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ အကြောင်းမှာ နိုင်ငံတော်သမတ အကြံပေးအဖွဲ့မှ ထိုသူနှစ်ဦးကို ၄င်းတို့နှင့် အတွေးအခေါ်ခြင်းတူညီပါသဖြင့် သမတ ကြံပေးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် အလိုရှိနေသောကြောင့် ဖြစ်ပါကြောင်း…….
ကိုလင်းဝေကျော်ပို့စ် က ဘာကိုပြောတာလဲ။ “လက်တွေ.မကြုံးဖူးဘဲနဲ.ကြားဖူးနားဝစကားတွေ” ဆိုပြီး ခင်ဗျားက ဘယ်မှာနေတာလဲ။ နာမည်ကတော့ အလန်းစားပဲ။ captain ဆိုတာရော america ဆိုတာရောနဲ့။ ခင်ဗျားကရာ ဘာပညာတွေ များတတ်ထားပါလိမ့်၊ သိချင်လိုက်တာ။ ကျွန်တော် ဥာဏ်မမီလို့ပါ ခင်ဗျ။
ဝက်နားရွက်ပြာ ဖြစ်စင်ကတော့ … တော်တော်ရီရတယ်..။
လူလည်း.. ကျောက်ကပ်ရောဂါဖြစ်ရင်… ကျွမ်းနေရင်.. ကျောက်ကပ်(အနည်းဆုံး တခြမ်းတော့) ထုတ်ပစ်လိုက်လို့ရတာပဲ..။
နောက်စာတွေကို.. Category ရွေးတင်ပါနော..။ ဒီလိုစာမျိုးဆို… Joke အောက်တင်သင့်တယ်..။
ဆရာ ကံချွန်ကတော့ ကြားဖူးနားဝ ဟာသပုံပြင်များ ဆိုပြီး ရေးဖူးတယ် ။ ဆရာလေး ရန်ရှင်း က လဲ ကြားဖူးနားဝ ပြောစကားများ ပေါ့ ဗျာ ။
ကြိုးစားပြီးရေးကြည့်ပါအုံးဖြစ်သွားမှာပါ …….။ ၀ါသနာတကယ်ပါတယ်ဆိုရင်ပေါ့။
သရော်စာဆိုတာ မရေးတတ်ရင် ကလော်ဆဲလိုက်တဲ့အတိုင်းဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။
လူကြီးလေသံနဲ့ ၀င်ဖြီးလိုက်အုန်းမှပဲ …
ဘာတဲ့ အထိုင်မတတ်တော့ ဖြဲသလို
အပြောမတတ်တော့ ဆဲသလို ဆိုထားတယ်လေဗျာ
ဟုတ်ကဲ့ပါ တရော်ကင်ပွန်း ၀ယ်ပြီး ခေါင်းအရင်လျှော်ကြည့်ပါမယ် လေးပေါက်ရေ…
ကျွန်တော် မောင်ရန်ရှင်းလေး နံမည်က ကက်ကင်းမမိဘူးဖြစ်သွားရင် တောင်းပန်ပါတယ်။ စာရေးခြင်တာရယ် ရီစရာ (သရော်တရော်) ရေးခြင်တာရယ် တစ်ခုပဲရှိတာပါ။ ဘယ်သူ့ကိုမှ တကယ်ထိခိုက်နစ်နာ စေလိုသော စေတနာတကယ်မရှိပါ။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်မှု့ မပါပါ။ (အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။) မည်သို့ပင် ဖြစ်စေကာမှု ကျွနှုပ် ဆက်လက်ကျိုးစားသွားပါမည်။ သတ်ပုံကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် ကျိူးစားမှု့ကို ကြံဖန်အာပေးပါ ခင်ဗျား။
:-) သတ်ပုံပါမှားနေတယ် သငယ်ချင်းရ……
လူကြီးတွေဘယ်လောက်အလုပ် လုပ်နေလဲကိုယ်တွေ.ပါ လက်တွေ.ကြုံမှနားလည်ျမှာပါ ….စစ်ဘက်မဟုတ်ပါ အရပ်ဖက် ရုံးပါ။ လုပ်တဲ့လူတွေတကယ်လူတွေတကယ်လုပ်နေကြပါတယ်………